China Wet uye Yakaoma Sponge Jecha Kuvharira Kwekunaka Kukwenenzara vagadziri uye vanotengesa | Xieyanshi
Iyo abrasives inogona kushandiswa pakugadzira mota basa, huni kana pani kugadzirisa.
Aluminium zviyo zvekupa nekukurumidza sanding mhedzisiro.
Vhura yekumhara chivakwa, wedzera kugadzikana pamwe nekudzivirira kuvhara.
Yakakodzera kwazvo ruoko ruoko sanding, yakakomberedzwa epurasitiki zvikamu kana fenicha.
Sponge grIndIng block, inozivikanwa se sponge sandblock, pollshIng grlndIng block, resln grlndIng block, abraslve grIndIng block, plastlc grindIng block, nezvimwewo, ls yakavakirwa pasiponji, uye ls yakavharwa wlth abraslve sandon the sponge, a klnd of pollshIng and pollshlngm.
lt inonyanya kugadzirirwa pamusoro pekugedzaIng, uye Inogona kutora mvura uye kuchengeta mvura kwenguva refu tlme. Inogona kuisa sandpaper yemvura. Sponge grIndIng blockscan inogadzirwa lnto varlous maumbirwo uye speclflcatlons.
Softback Sanding Sponge jecha rakaoma-kusvika-nzvimbo munzvimbo dzemotokari, marori uye mavans senge akakomberedza mwenje kuvhura, masuo ekubata, masuo emusuwo uye dzimwe nzvimbo. Iyo yakapfava, inoshanduka furo inotsigira inoenderana nechero chero chimiro kana chimiro pamotokari. Aya chipanji akafukidzwa neyakareba-yakareba aluminium oxide hasha.
Inoita Inorema Sanding Nyore
Paunenge uchida kujecha nzvimbo iri kunetsa kusvika, kana uchida jecha rakafanana, sarudza iyo Softback Sanding Sponge yekukwanisa kwayo kuenderana nechero chimiro kana kusvika munzvimbo dzakaoma. Iyo yakapfava furo inotsigira inoshanduka kupfuura yakajairika bepa yakatsigirwa sandpaper. Kuti uwane nzvimbo dzakaomarara, rutsigiro rwekupupa furo rwakaitwa rwakaonda zvakanyanya kana ichienzaniswa nesipanji dzakawanda dzejecha. Shandisa aya masiponji ekushandisa-sanding application uko iwe kwaunoda kunyatsoita uye ruzivo kupfuura zvaungave uchigona nemushini-sanding nzira.
Abrasives zvinhu: Aluminium oxide
Zvinhu zvekutanga: banga repepa rinonamira kune Sponge
Namira: Phenolic nebwe
Chipanji chakanyorovera uye chinoshanduka, chakakodzera sanding yakaonekwa nzvimbo uye zvisina kujairika, zvakaoma-kusvika-ruzivo neruoko.Iyo inonyanya kubatsira muindasitiri yemotokari uye nebazi rekugadzirisa mota. yejecha kuburikidza nepamusoro.
Zvadaro: Square Sandpaper Sheet reRandom Orbital Sander-A720T